SEX AND THE CITY2ရှိအချိန်တိုင်း၌၎င်းသည်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဆန့်ကျင်သောရာဇ ၀ တ်မှုဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည် - သတင်း
Sex and the City2ရှိအချိန်တိုင်း၌၎င်းသည်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဆန့်ကျင်သောရာဇ ၀ တ်မှုဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်
ဒါဟာမကြာသေးမီကလိင်အကြောင်းကြေငြာခြင်းခံခဲ့ရပြီးမြို့က reboot တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ Samantha sans ကအင်တာနက်ကတစ်ပတ်လုံးပြောထားသည်။ သို့သော်သင် Facebook ၌ခဏတာမမက်ဆေ့ခ်ျပို့ပြီးမက်ဆေ့ခ်ျအသစ်များအထက်တွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှလွန်ခဲ့သောမယုံနိုင်လောက်အောင်လွန်ခဲ့သောစကားများဖြင့်တွေ့ဆုံခြင်းနှင့်တူသည်နှင့်အမျှလိင်နှင့်စီးတီးပြန်လည်ဖွင့်ခြင်းသည်၎င်းမတိုင်မီကအမှတ်ရစရာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ မကြာသေးမီကဒုတိယမြောက်ရုပ်ရှင်သည် Sex and the City2ဖြစ်သည်။
ဒီရုပ်ရှင်ဟာလူသားတွေကိုဆန့်ကျင်တဲ့ရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာရှုပ်ထွေးပါတယ် ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခုထက်မကပါ။ ၎င်းသည် SATC ကြားဖြတ်အတွက်ထိုးနှက်။ မပျော်နိုင်။ တော်တော်လေးမတည်မငြိမ်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်မျက်စိကိုနာကျင်စေသည်။ ဒီရုပ်ရှင်အတွက်ပြေးဆွဲနေတဲ့ ၂ နာရီခွဲလောက်မှာ burkas တွေ၊ ဖြောင့်မတ်တဲ့လူတွေရဲ့ဒဏ်aboutာရီနဲ့ပိုဆိုးတဲ့အဝတ်အစားတွေအကြောင်းရယ်စရာပြက်လုံးတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်။ SATC 1 (ပထမဆုံးရုပ်ရှင်) ဟာလျောက်ပတ်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါဘာလို့မဖြစ်ခဲ့တာလဲလို့ငါမကြာသေးခင်ကပဲပြန်စမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ ငါဘယ်လောက်မှားသလဲယေရှု SATC2 သည် SATC1 နှင့်မနီးပါ။ ပထမဆုံးရုပ်ရှင်သည် Vivienne Westwood မင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံဖြစ်လျှင်ဤရုပ်ရှင်သည် Primark အသုဘဝတ်စုံဖြစ်ပြီးသင်ဘောင်းဘီကိုမေ့သွားသည်။ မကောင်းဘူး
ဒီဟာကိုသိတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးစဉ်းစားတဲ့တခြားသူတွေရှိသင့်တယ်၊ ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ခွင့်ပြုခဲ့တာလဲထပ်ခါတလဲလဲ။ SJP နှင့်ဂိုဏ်းတို့သည်ဤမျဉ်းကြောင်းများကို gagging မပါဘဲမည်သို့ပြောခဲ့ကြသနည်း။ ၎င်းသည်တောက်ပနေသောခြေကျင်းတွင်မျဉ်းကြောင်းဖြတ်နေသည်ဟုအဘယ်ကြောင့်သူတို့မခံစားရသနည်း။ ကျေးဇူးပြု။ ငါနှင့်အတူဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပါစေ။ ဤအရာများသည်ဒုတိယလိင်နှင့်စီးတီးရုပ်ရှင်၏အဆိုးရွားဆုံးအချိန်များဖြစ်သည်။ မိန်းကလေးများကိုရယူပါ၊
အဆိုပါ fuck ဆိုတဲ့အိုငျးရစျထိန်း tits ပေးနေရတယ်
ဒီအကျင့်စာရိတ္တကိုအိုင်ယာလန်ဘာသာအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းသည်သူမနှင့် ပတ်သတ်၍ တုန်ခါနေသည့်ဂီတသံကိုနောက်ခံတွင်တီးမှုတ်နိုင်စေရန်အတွက်သောကြာနေ့သဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်သင့်သည်။
မင်းသမီးကဒီအပိုင်းကိုသရုပ်ဆောင်ခိုင်းတဲ့အတွက်အလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာ Tits: Will With With Up With With Later လို့ရေးထားတယ်။
@everyoutfitinsatc ဖြစ်ရန်နှင့်ကျရှုံးရန်ကြိုးစားသော 80s throwbacks
Samantha ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ Anti-aging ဖြည့်စွက်စွဲ
Kim Cattrall သည်ထိုဖြည့်စွက်ချက်တစ်ခုခုကိုလိုအပ်လိမ့်မည်ဟုဟန်ဆောင်ဟန်ဆောင်ရန်ခက်ခဲသောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်မဟုတ်ပါ။ သူမမှာအချိန်ကုန်နေသည်။ (ထို့အပြင်သူမသူတို့ကိုမလိုအပ်ပါဘူးဒါကြောင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလူငယ်၏စမ်းရေတွင်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ )
Big နှင့် Carrie '' အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် '' ခံရ
SATC2 တွင်ပြဇာတ်၏အဓိကဓာတ်ကူပစ္စည်းမှာ Big နှင့် Carrie တို့သည်ရုပ်မြင်သံကြားဖြင့်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ရုပ်မြင်သံကြားတစ်ခု! တစ်ယောက်ယောက်က HBO လို့ခေါ်တယ်၊ ငါ့ရဲ့လိင်မှုနှင့်မြို့တော်ကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့တယ်။
Big ကငါဆိုလိုသည်အဘယ်အရာကိုသိရန်ထင်လို 'စျေးကွက် 100 မှတ်ကျဆင်းသွား' 'ဟုပြောသည်အခါ
ဒီရုပ်ရှင်ကိုဘယ်သူကြည့်နေတာလဲသိလား။ သင်္ချာပညာရှင်၊ နံပါတ်တွေအကြောင်းပြောပြပါ။
သင် Carrie Bradshaw ပါ ASDA သို့ခရီးစဉ်အပြီးတွင်အားကစားနေ့တစ်ခုသို့သင်ပြသောမိခင်တစ် ဦး မဟုတ်ပါ။ ဒီနည်းကားအဘယ်နည်း။
Miranda စဉ်ဆက်မပြတ်အာရ butchering
ကျနော်တို့သူမ၏စကားလုံးများကိုအသစ်သင်ယူခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ ပြက်လုံးသည်းခံရ၏ရန်ရှိသည်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူတို့ကပင်အာရမဟုတ်။ သူမသည် haanjee အာရဗီအတွက်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပြီးမဟုတျပါဘူး Aiwa ဟုတ်ကဲ့! Haan / haanjee သည်ဟိန္ဒူဘာသာ၌ဟုတ်သည်။
Santa Cruz uc UC Berkeley မှ
အဘူဒါဘီကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားတွေ့မှာလဲ။ Charlotte က မင်းပတ္တမြားတွေမြည်းရှိလား? Carrie ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်, အရှေ့အလယ်ပိုင်းသေးပိုက်ဆံရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိသေးပေ! သူတို့ x လုပ်တဲ့အခါသူတို့အတွက်အရမ်းကောင်းတယ်
Carrie အနေဖြင့်ဤအမျိုးသမီးကို Abu Dhabi ၏အိမ်ရှင်မအဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။
ထိုအခါအိုဘုရားသခင်, ငါ့ကို niqabs နှင့် Burkas အပေါ်စတင်ရန်မထားပါနဲ့
ဤရုပ်ရှင်နှင့်ငါပြောရန်အလျင်အမြန် - ဤရုပ်ရှင်သည် Boris Johnson ထက် ပို၍ ဆိုးရွားသည်။ ဒါဟာမသက်ဆိုင်သောဖြစ်ပါတယ်။ အထူးမီးမောင်းထိုးပြခြင်း (သို့မဟုတ်အလင်းနည်းနည်း) တွင် - burkas ဝတ်ဆင်ထားသောဈေးသည်များသည်စျေးကွက်မှထွက်ခွာသွားရန်အယောင်ဆောင်။ ၊ FLASH AN ANKLE သို့သာလျှင်၊ သူတို့ကတက္ကစီစီးလာနိုင်သည် (ကျွန်ုပ်သည်ဤတွင်သေနေသောအချိန်) နှင့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး မှတစ်ဆင့်ချစ်ပ်တစ်လုံးစားနေသည်ကိုသတိပြုမိလိုက်သည် သူမ၏ niqab ။ ငါသူမ၏အလွန်အဆင်ပြေစေသေချာပါတယ်။
Carrie ပြောသည့်အချိန်ကာလအတွက်အပိုဆုအချက်များသည်ပါးစပ်ကိုဖုံးအုပ်ထားသောကုလားကာဖြင့်ငါမတက်နိုင်ပါ။ သူတို့ကသူတို့ကိုသူမအနောက်တိုင်းသားဖြစ်ခြင်းနှင့်သူမမျက်နှာဖုံးတွင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုယ်စားစကားပြောခြင်း၏အမြီးအမောက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတိမထားမိသောအသံမလိုချင်သောကြောင့်ခံစားရသည်။
ဇာတ်ကောင်ကိုသင်နေသော The Simpsons ပဟေဠိ
ginormous အချိုးအစား၏တစ် ဦး က monstrosity ။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့မည်သည့်ရုပ်ရှင်ကိုမဆိုအားနည်းချက်တွေနဲ့တွေ့နိုင်ပေမယ့်ဒီဟာကအခြားတစ်ခုပါ။
ဘယ်အချိန်မှာ Carrie AIDAN နှင့်အတူ BIG ON CHEATS
ငါပဲခြောက်လရာသီနှင့်သင်တ ဦး တည်းအင်္ဂါရပ်အရှည်ရုပ်ရှင်ကိုသာသင် Big နှင့်အတူအပေါ်လိမ်လည်လှည့်သူသည်သင်၏ဟောင်းနှင့်အတူသူ့ကိုအပေါ်လိမ်ဖို့, ဒီစိတ်ခံစားမှုတန့်လူသား၏စိတ်နှလုံးအနိုင်ရဖို့ကြိုးစားနေကြည့်ရှု! ဒါကြောင့်တစ် ဦး မိုက်မဲကြံစည်မှုအချက်ဖြစ်သကဲ့သို့တစ် ဦး ပါးစပ်၏တာတာ။
ငါ့ ဦး ခေါင်းကငါ့လက်ထဲမှာရှိနေတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ကားရဲ့အမှတ်တရများကိုပြန်လွှတ်ပေးပါ အသစ် 2021 လိင်နှင့်စီးတီး2reboot အသစ်အမည်ပြောင်းနှင့်ကျော်ကရေးသားကြကုန်အံ့။ ငါအခြားမည်သည့်လမ်းအပေါ်မသွားနိုင်ပါ။
• ဒီအချက်ကိုတစ်ချိန်ကနှင့်အပြီးသတ်ဖြေရှင်းကြပါစို့: သင်သည်မည်သည့်လိင်နှင့်မြို့တော်ကောင်လား။
• အဆင့် - ဒူဘိုင်းမှာရှိနေစဉ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏နောက်လိုက်များဆုံးရှုံးခဲ့ရသောအဖြစ်မှန်ကြယ်များ
• ပဟေizိ - လိင်နှင့် The City မှမည်သည့်ယောက်ျားလေးများကိုသင်နှင့်အဆုံးသတ်ရမည်နည်း။